Bogga ugu weyn Sida Loo Helo Dulsaarka Crypto: Ribada iyo Dakhliga
Markaa waxaad xiisaynaysaa cryptocurrency oo waxaad doonaysaa inaad u beddesho Bitcoin lacag caddaan ah ama waxaad doonaysaa inaad barato sida loo kasbado dulsaarka crypto. Waxay u badan tahay inaad maqashay dhammaan sheekooyinka guusha ee ku saabsan dadka samaynaya malaayiin doollar iyagoo hore u soo galaya oo ku iibinaya qiimo sare. Waxaa laga yaabaa inaad leedahay saaxiibo dakhli joogto ah ka hela macdanta cryptocurrency.
Qof kastaa wuxuu galaa ganacsiga cryptocurrency isagoo ujeedadiisu tahay inuu lacag sameeyo, laakiin qof kastaa kuma guulaysan. Dad badan ayaa iska daaya ama way waayaan lacag taas oo ay sabab u tahay faham la'aantooda sida loo abuuro lacag iyagoo isticmaalaya cryptocurrencies.
Suuqa cryptocurrency ayaa wali ku jira heerarkiisa hore ee koritaanka. Marka qiimaha crypto-hanti kor u kaco, dad badan ayaa soo galaya suuqa. Kuwan cusub ayaa si joogto ah isku dayaya inay ogaadaan sida looga faa'iidaysto cryptocurrency.
Warka wanaagsani waa in ay jiraan habab badan oo looga faa'iidaysto cryptocurrency. Laga soo bilaabo 2011, ganacsiga bitcoin wuxuu arkay kobaca joogtada ah ee ka qaybgalka horumarinta, dhaqdhaqaaqa warbaahinta bulshada, iyo tirada bilawga bilawga ah.
Maqaalkan, waxaan ku siin doonaa hage tallaabo-tallaabo ah si aad u kasbato xiisaha cryptocurrency. nagu dheji dhowr daqiiqo.
Iyada oo aan dib loo dhigin, aynu toos ugu socono ganacsiga.
10ka Cryptocurrencies ee ugu sarreeya ee la maalgashado 2022
Waa maxay Koontada Dulsaarka-Cryptocurrency iyo sidee buu u shaqeeyaa?
Koontada cryptocurrency ee kasbashada ribada waxay ku shaqeysaa isla mabda'a sida koontada kaydka dhaqameed. Waxaad dhigataa cryptocurrency-gaaga, hantidaaduna waxay dhalisaa dulsaar isku dhafan.
Farqiga ugu weyni waa in heerka soo celinta uu aad uga weyn yahay koontada kaydka caadiga ah. Waxa kale oo aad ka heli kartaa faa'iidada toddobaadlaha ah boorsadaada oo aad kala bixi kartaa lacag mar kasta oo aad rabto.
Koontada Sallie Mae's SmartyPig waxay hadda bixisaa wax-soosaarka boqolkiiba sannadlaha ah ee ugu sarreeya (APY) ee 0.7 boqolkiiba gudaha Maraykanka, taas oo ah 11 jeer celceliska qaranka FDIC ee 0.06 boqolkiiba.
Xisaabaadka dulsaarka ee Crypto waxay bixiyaan dulsaar ilaa 7.5 boqolkiiba APY, celcelis ahaan. Si kastaba ha noqotee, meelaha qaarkood ayaa laga yaabaa inay ku siiyaan inaad kasbato ilaa 12.73 boqolkiiba waxsoosaarka sanadlaha ah (APY) ee lacagahaaga crypto oo aan lahayn shuruudo xidhid ama dhigaal.
Xoogagga suuqa ayaa go'aamiya heerka dulsaarka, kaas oo lagu bixiyo bitcoin. Waxaa laga yaabaa in lagaa rabo inaad bixiso kharashka ka noqoshada, taas oo wax laga beddelayo si joogto ah iyadoo lagu saleynayo shuruudaha xannibaadda.
Sababtoo ah waxay amaahinaysaa hantidaada crypto shakhsiyaadka, ururada, ama machadyada iyadoo lagu saleynayo hawlahooda ganacsi, madalkaaga ayaa ku siin kara qiimo dulsaar sare leh.
Amaah-qaadayaashu waxay bixiyaan dulsaar sare hantida ay soo celiyaan, madalkaaga waxay haysaa qayb yar oo ka mid ah dulsaarka waxayna kuu qaybinaysaa inta soo hadhay.
Xuddunta vs. Kala-doorashada xiisaha Cryptocurrency ee baahsan
Iyadoo aad haysatid dooral badan oo aad ku kasbato dakhliga hantidaada dhijitaalka ah, waxaa jira laba siyaabood oo waaweyn oo aad ku kasbato. Si aad u bilawdo, waxaad isticmaali kartaa meel dhexe oo kuu ogolaanaysa inaad kasbato dulsaarka koontada cryptocurrency ee bixiya ribada.
Bilaabayaashu waxay ogaan doonaan in koontooyinka dulsaarka dulsaarku ay yihiin habka ugu fudud ee lagu bilaabi karo samaynta dakhliga aan tooska ahayn ee bitcoin kooda, dakhliga sanadlaha ah wuxuu u dhexeeyaa 4% ilaa 12% taas oo ku xidhan cryptocurrency.
XIDHIIDHKA: Sidee Looga Iibsadaa Crypto Webull?
BlockFi, Celsius, iyo Crypto.com waa seddex ka mid ah xalalka dhexe ee ugu wanaagsan ee lagu kasbado dulsaarka cryptocurrencyga.
Codsiyada Ethereum ee baahsan ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad kasbato dulsaarka cryptocurrency adigoon u baahnayn goob lagu sii hayo hantidaada dhijitaalka ah. Iyadoo la isticmaalayo shabakadda Ethereum waxay u baahan tahay dhowr tillaabo oo dheeraad ah marka loo eego goobta dhexe, waxaa jira faa'iidooyin muuqda.
Heerarka sare ee ribada ayaa inta badan laga heli karaa barnaamijyada sida Aave ama iyadoo la siinayo lacag-dhaaf ah kaarka deynta.
Raadi Kaararka Debit-ka Bitcoin ee ugu Fiican 2022
Lahaanshaha koontada crypto-ka-helidda dulsaarka ma tahay Dhaqdhaqaaq Halis ah?
Abaal marin weyn waxaa weheliya khatar sare. Si kastaba ha ahaatee, xaaladdan, khatartu waxay la mid tahay goobta aad dooratay inaad maalgashato. Khatarta jabsiga iyo dayn-qaaduhu waa labada khatarood ee muhiimka ah ee ay tahay inaad ka werwerto.
Hackers-ku waxay si fudud u heli karaan nidaamyada leh kaabayaal ammaan oo xun, ma jiraan wax sir ah, iyo boorso kulul halkaasoo calaamadahaaga lagu hayo. Shirkadaha aan haysan ogolaanshaha hawlgalka waxay sidoo kale u nugul yihiin jebinta.
Deymaha deyn-qaadayaasha waxaa inta badan go'aamiya cidda madal ay go'aansato inay ku kalsoonaato. Heerka khatarta waa la dhimaa marka shirkadu ay ku hormarto sharciyada amaahda oo ay ilaaliso baahida adag ee dhigeeda.
Kahor intaadan shubin lacagtaada, waa fikrad wanaagsan inaad eegto tillaabooyinka amniga ee ay qaado goobta. Fireblock's multiparty computation architecture, tusaale ahaan, waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo lacagta caddaanka ah akoonnada crypto ee ribada laga helo sida Hodlnaut.
Waxa kale oo ay bixisa beddelka caymiska dhaqameed ee qaabka ilaalinta haynta isticmaalaha. Haddii ay dhacdo cillad la'aan, shirkaddu waxay nuugtaa khasaaraha waxayna macaamiisheeda ku magdhowdaa raasamaal caddaalad ah. Xaaladahan oo kale, khatartu waxay u badan tahay inay yaraato.
Sida loo helo dulsaarka Cryptocurrency
Ciwaanka hoose ee soo socda ayaa eegi doona siyaabaha kala duwan ee aad u kasban karto xiisaha crypto…
1 Abuur xisaab cryptocurrency ah.
Si aad u bilawdo, u samee akoon goob kuu ogolaanaysa inaad kasbato dulsaar hantidaada cryptocurrency.
Waxaad ku biiri kartaa liiska sugitaanka si aad Ethereum uga qayb qaadato cusboonaysiinta Eth 2.0 dabayaaqada sanadkan haddii aad hore u leedahay koontada Coinbase. Xaqiijiyayayaashu waxay kasbadaan dulsaar iyagoo dulsaaraya Ethereum caddaynta cusub ee shabakada saamiga, sida macdan qodayaasha ay sameeyaan caddaynta awoodda ee xannibaadaha shaqada.
Coinbase wuxuu helayaa dhimis 25% dakhliga Ethereum, laakiin sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad saami ku yeelato qadar kasta oo Ethereum ah shabakada (oo ka soo horjeeda shuruudaha 32 Eth ee loo baahan yahay si madax-banaan).
Soo hel dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato Ethereum, arag: Ethereum ma maalgashi wanaagsan baa? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaatow
2. Samee is barbar dhig heerka dulsaarka.
Mareegta madal, waxaad ka arki kartaa heerka dulsaarka aad ku kasban doonto lacagaha crypto kala duwan. Xitaa haddii aad ku maalgeliso cryptocurrency isku mid ah, heerka dulsaarka aad kasbato wuu ka duwanaan karaa iyadoo ku xiran haddii shirkadu ay gooyso dakhliga.
Heerarka dulsaarka ee xisaabaadka kaydka ayaa had iyo jeer isbedela. Tani waxay ka dhigan tahay in dulsaarka amaahda crypto ay isbedbedesho iyadoo lagu saleynayo sahayda iyo baahida. Maalgashadayaasha la xoojiyey iyo wax-iswaydaarsiga ku bixiya faa'iidada madalkooda ayaa had iyo jeer codsada amaahda cryptocurrency.
XIDHIIDHKA: Sida Loogu Iibsado Safemoon Bitmart: Tillaabo-Tallaabo Tusaha
Dulsaarka wanaagsan ee qadaadiicda deggan inta badan waa inta u dhaxaysa 6% iyo 9%. Heerarka dulsaarka Cryptocurrency aad ayuu u sarreeyaa -- ilaa 100% xaaladaha qaarkood.
Heerarkaan dulsaarka sare, dhanka kale, waa in loo arkaa inay calaamad u yihiin sicir bararka crypto ee weyn iyo boosaska aadka loo faa'iido. Haddii aad ku cusub tahay kasbashada dulsaarka cryptocurrency, ka digtoonow dulsaarka crypto kasta oo ka sarreeya 25%.
3. Ku dar lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' faylalkaaga.
Nidaamyo badan oo dulsaar kasbashada ayaa ka dhigaya mid fudud in la maalgeliyo akoonkaaga. Mareegaha qaar, sida BlockFi iyo Coinbase, waxay kuu oggolaanayaan inaad iibsato cryptocurrency adoo isticmaalaya akoonkaaga bangiga.
Haddii aanad hore u lahayn wax cryptocurrencies, tani waxay ka dhigaysaa kasbashada dulsaarka mid fudud.
Haddii aad akoon ka furato goob kaliya oo aqbala dhigaalka cryptocurrency, waxaad u baahan doontaa inaad furto koontada sarrifka crypto haddi aanad hore u lahayn. Coinbase, eToro, iyo Gemini waa seddexda wax-isweydaarsiga bitcoin ee caanka ah.
Waxaad ku shubi kartaa qadaadiicdaada ciwaanka boorsada crypto meesha aad rabto inaad ka kasbato dulsaar ka dib iibsashada crypto mid ka mid ah sariflayaashan.
Laga maqlay Safemoon Crypto: Waa maxay oo ay tahay inaad maalgashato?
4. Samee lacag adoo kasbanaya dulsaar.
Waxaad bilaabi doontaa ururinta ribada markaad lacag ku shubto akoonkaaga dulsaarka. Si fudud u fadhiiso, naso, oo fiirso faylalka cryptocurrency ee horumarsan. Maalgashadayaasha Cryptocurrency kuwaas oo saadaaliyay qiimaha Bitcoin iyo cryptos kale ayaa kor u kici doona mustaqbalka fog waxay heli doonaan xiisaha kasbashada cryptocurrency gaar ahaan soo jiidasho leh.
Tan waxaa sabab u ah koontada dulsaarka ee krypto awood kobaca jibbaarada. Tusaale ahaan, haddii aad $30,000 ku maalgelisay bitcoin bilawga sanadka, dulsaarka aad ka heshay qiimahaas wuxuu noqonayaa $60,000 dhamaadka sanadka. Ma aha oo kaliya, laakiin 7% dulsaarka aad ka heli doonto $ 60,000 bitcoin waa labanlaab waxa aad ka heli doonto maalgashiga ugu horreeya.
Siyaabo kale oo lacag loo helo waa ka ganacsiga cryptocurrencies. Inkastoo xaqiiqda ah in celceliska maalinlaha ah ee ganacsiga cryptocurrency uu yahay 1% kaliya ee suuqa sarrifka lacagaha qalaad, suuqa crypto waa mid aad u kacsan. Natiijo ahaan, waxaa jira suurtagalnimada ganacsiga muddada gaaban.
Inkasta oo ganacsiga cryptocurrency uu weli yar yahay, waxay leedahay meel badan oo lagu horumariyo. Oo ay la socdaan qaar ka mid ah cryptos-ka aadka loo yaqaan, sida Bitcoin, Ethereum, Cardano, AMP, Dogecoin, ElonGate, Iota, Moonshot, Polygon, Safemoon, Stellar, Tether, VTHO, Shiba Anu
Bitcoin, Ethereum, Litecoin, iyo Uniswap waa qaar ka mid ah lacagaha ugu caansan ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' oo ay maalgashadayaashu ku kasban karaan dulsaar. Dulsaarka akoonnadan waxaa lagu bixiyaa qaab cryptocurrency ah ee akoonkaaga dulsaarka ah, iyadoo la hubinayo inaad ilaaliso la kulankaaga suuqa crypto kasta oo aad maalgashanayso.
Haysashada boorsooyinka ugu fiican waxay ka dhigi doontaa khibradaada si aad u ogaato 15-ka Boorsada Bitcoin ee ugu Fiican 2022.
Maalgelinta cryptocurrency ee dulsaar leh qaarkood ayaa laga yaabaa inay rafcaan ka qaataan maalgashadayaasha khatarta ah. Goobaha qaarkood waxay bixiyaan xisaabaadka kaydka lacagta qadaadiicda ah, kuwaas oo ah lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' oo lagu dhejiyay hanti kale, inta badan doolarka Maraykanka.
DAI, Tether, iyo USDC waa saddex qadaadiic oo xasilan oo caan ah oo maalgashadayaasha ay isticmaalaan si ay u helaan dulsaar. Qiimaha dulsaarka amaahda crypto way kala duwanaan doonaan iyadoo ku xidhan qadaadiicda deggan ee aad doorato. Tan badanaa waxaa saameeya sahayda iyo baahida loo qabo amaahda crypto ee isbedbedesha.
Inta badan dulsaarka lagu kasbado crypto waa sicir isbedbeddelaya oo ku saleysan sahayda iyo baahida. Inkasta oo sicirku isbeddelo, APR ee inta badan qadaadiicda waaweyn waa mid joogto ah. Heerarka dulsaarka Bitcoin, tusaale ahaan, waa caadi ahaan gobolka 4% ilaa 8%.
XIDHIIDHKA: Waa maxay Litecoin? Qiimaha, Dulmarka iyo Sida ay u shaqeyso
Xisaabaadka Crypto dulsaarka-helitaanka ma kugu habboon yihiin?
Maalgelinta lacagta loo yaqaan 'cryptocurrencies' waa istaraatijiyad aad u wanaagsan oo lagu kala gato faylalkaaga. Inkasta oo dad badani ay u arkaan inay tahay hab lacag lagu sameeyo mustaqbalka dhow, awooddeeda dhabta ah ayaa la xaqiijin doonaa marka dhaqaalaha baahsan uu noqdo mid baahsan, taas oo noqonaysa mid dhab ah maalin kasta.
Xisaabaadka dulsaarka ayaa bixiya abaal-marin macaan oo loogu talagalay dulqaadka milkiilayaasha crypto kuwaas oo raba inay hayaan hantidooda mustaqbalka fog.
Si kastaba ha noqotee, samee baaritaankaaga saxda ah ka hor inta aadan ku shubin hantidaada crypto akoon dulsaar kasasho si aad u hubiso nabadaada maskaxda.
Ama waxaad hubisaa 21 ugu xasilloon Cryptocurrency sanadkan
Miyaad u maleyneysaa inaad ku kalsoonaan karto xasilloonida iyo koritaanka crypto? Waxaan kugula talineynaa inaad isku daydo inaad yeelato koonto dulsaar kasasho si aad u kobciso crypto-kaaga.
Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay qoraalkan mid macluumaad badan fadlan nagu soo ogeysii sida aad u aragto qaybta faallooyinka ee hoose.
Miyaan iibsan karaa cryptocurrencies?
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrency' waa maalgashi aad u mala-awaal ah oo kacsan. Maalgelinta saamiyada shirkadaha caanka ah ayaa inta badan ka ammaan badan maalgashiga cryptocurrencies sida bitcoin.
Ma sharci baa in lagu ganacsado cryptocurrencies?
Shaki kuma jiro inay sharci ku yihiin Maraykanka, halka Shiinuhu uu si hufan u mamnuucay isticmaalkooda, iyo haddii ay sharci ku yihiin dalalka kale ugu dambeyntii waa arrin ku saabsan madaxbannaanida qaranka. Sidoo kale, ka feker sida aad naftaada uga ilaalin lahayd khayaanada u arka cryptocurrency inay tahay hab lagu khiyaaneeyo maalgashadayaasha. Iibsadaha iska jira, sida had iyo jeer.
. Ma caqli baa in la maalgeliyo cryptocurrencies?
Cryptocurrencies ayaa laga yaabaa inay qiimeeyaan qiimaha, laakiin maalgashadayaasha badan ayaa u arka inay yihiin maalgashi mala awaal ah halkii ay ka ahaan lahaayeen maalgashi mustaqbalka fog ah. Waa maxay sharaxaadda tan? Cryptocurrencies, sida lacagaha dhabta ah, ma laha lacag caddaan ah, sidaas darteed si aad u faa'iido, qof kale waa inuu bixiyaa lacag ka badan inta aad bixisay.
4. Waa imisa tirada guud ee lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'?
Sida laga soo xigtay CoinMarketCap.com, website-ka cilmi-baarista suuqa, in ka badan 15,000 cryptocurrencies kala duwan ayaa si guud loo kala iibsadaa. Cryptocurrencies ayaa wali kor u kacaya.
5. Waa maxay dhabta ah cryptocurrency?
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrency' waa nooc lacag-bixineed khadka ah oo laga yaabo in loo isticmaalo iibsashada iyo iibinta alaabada iyo adeegyada. Ganacsiyo badan ayaa samaystay lacag u gaar ah, oo loo yaqaano token, kuwaas oo lagu badalan karo alaabta ama adeegyada ganacsigu bixiyo.
Maalgelinta cryptocurrency ma tahay ikhtiyaarka saxda ah ee lacagtaada
Sida Loo Sameeyo Lacag Iibsiga Iyo Iibinta Cryptocurrency
Bitcoin ma Maalgelin Wanaagsan? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Sida Loo Iibsado QOYSKA
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrencies' sida WETH waa noocyo la calaamadeeyay oo ah lacagta 'cryptocurrencies' kuwaas oo lagu dhejiyay qiimaha qadaadiicda asalka ah.…
Sida loo iibsado Elon Gate Crypto
Weligaa ma rabtay inaad barato sida loo iibsado Elon Gate Crypto? 2021, waxaan wax ka baadhay khadka, oo…
Sida Looga Iibsado Ikhtiyaarada Webull: Talaabooyinka Fudud Ee Shaqeeya
Webull waa mid ka mid ah kooxaha dilaaliinta ee dib u qeexaya warshadaha maalgashiga. Waxaa la aasaasay 2017, webull…
15-ka Boorsada Bitcoin ee ugu Fiican 2022
Suuqa cryptocurrency waxa uu horumaray sanadihii la soo dhaafay iyada oo dad badan ay ka ganacsadaan oo maal galiyaan cryptocurrency maalin kasta.…
Waa inaad ka fikirtay inaad ku maalgeliso cryptocurrency mar uun. Asal ahaan, crypto-ka ugu fiican ee lagu maalgeliyo waa…
Kaararka Debit-ka Bitcoin ee ugu Fiican 2022
Kaarka debit-ka ee bitcoin wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku bixiso cryptocurrency-gaaga sida aad ugu bixin lahayd lacag caddaan ah oo joogto ah…